मधेसबारे सेनाले लियो यस्तो निर्णय , थप सेना मधेशमा ! - USNEPALNEWS.COM
मधेसबारे सेनाले लियो यस्तो निर्णय , थप सेना मधेशमा !
काठमाडौं । नेपाली सेनाले तराईको सुरक्षा स्थितीबारे चिन्ता जनाउँदै पृतना (ब्यारेक) थप्ने निर्णय गरेको छ । यो सेनाको इतिहासमै पहिलो निर्णय हो । जहाँ मधेसमा अब पृतना थप हुने भएको छ ।
सेनामा हाल दिपायल, सुर्खेत, पोखरा, हेटौडा, इटहरी र काठमाडौमा पृतनाको संरचना रहेको छ । सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक राज्यमा एउटा पृतना राख्ने प्रस्ताव गर्नुको साथै काठमाडौंमा पनि एउटा पृतना थप्नुपर्ने भनेको छ ।